Dowlada turkiga oo Qaadeysa Dhaawacyadii Qaraxii ka dhacay Magaalada Muqdisho – SBC
Dowlada turkiga oo Qaadeysa Dhaawacyadii Qaraxii ka dhacay Magaalada Muqdisho
Dowlada Turkiga ayaa dalkeeda geyn doonta qaar ka mid ah dhaawacyadii qaraxii dhawaan ka dhacay Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho kuwaasi oo ay waxyeelo daran ay ka soo gaartay Dad maato ah oo u badan waalid iyo caruurtood sugayay natiijada deeq waxbarasho oo turkigu bixiyay.
Maanta ayaa lagu wadaa in Diyaarad laga soo diray wadanka turkiga ay soo gaarto Magaalada Muqdisho taasi oo lagu qaadi doono dhaawacyada halista ah ee ku waxyeelobay Magaalada Muqdisho.
Masuuliyiinta Dowlada Soomaaliya Iyo turkiga Sheekh Shariif Iyo raiisul wasaraha Turkiga oo khadka telfoonka ku wada hadlay ayaa waxaa ay isku afgarteen in dowlada turkiga Caawimaad dhinaca caafimaadka ah ay u sameyso dadkii waxyeelada daran ay soo gaartay.
Dowlada Turkiga ayaa lagu wadaa inay qaado 30 ka mid ah dadka qaba dhaawacyada halista ah ee ka soo gaartay falka ay alshabaab ka geysteen dhismayaal ay lahayd Dowlada KMG ee Soomaaliya.
Dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa xilli booqday dhawacyadaasi oo ku jira isbitaalada Magaalada Muqdisho waxaa uu u balanqaaday in loo qaadi doono kuwuuda halista dalka dibadiisa si baxnaanin caafimaad loogu soo sameeyo.
Turkiga waxaa uu safka hore kaga jiraa dowladaha gurmadka iyo caawinta la garan taagan dowlada Soomaaliya waxaana turkiga raiisul wasaraheeda uu ahaa masuulkii ugu horeeyay ee taga Magaalada Muqdisho oo xaalado dagaal ka jiraan markii ay abaarta Baahsan ka dilaacday Magaalada Muqdisho ee caasimada Dalka.